Archive du 09-nov-2020
Infirmiera gasy ... Miatrika Covid-19 ao Frantsa
Tsy mbola tapitra ny COVID-19 any Frantsa ary mbola ao anatin'ny ady tanteraka amin'ity valan'aretina ity ny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Miasa mafy ireo mpiasan'ny fahasalamana any an-toerana araka izany, izay ahitana vehivavy malagasy
Manala kentrona ho anireo 50 taona no mihoatra
Rehefa mitombo ny taona dia mitombo tsikelikely ihany koa ny kentrona eo aminny tarehy. Maro be ny antony mahatonga ireo, ary matetika no efa entina aminao eto izy ireo. Manodidina ny 30 taona eo nefa matetika dia efa ilàna fanosorana krema aminizay ny hodi-tava mba tsy hampiroraka sy hampihenjana azy.
« Huile damande douce » ; mahasalama ny hoditra
Iray aminireo karazana menaka natoraly be mpampiasa indrindra ny « huile damande douce » noho ireo vokatsoa maro entiny na ho antsika lehibe fa indrindra ho anny zazakely.
Nolazainny dokotera fa mila misotro rano be aho, satria maloto ny ao anaty.
Tena kamo misotro rano anefa aho, indrindra aminizao andro mangatsiaka izao, ka sao mba manana torohevitra ianareo mba hampazoto ?
Bolety aminny vary sy manga
Ho anny bolety · Manga 1 · Voanjo nototoina · Amandes · Atody 2 · Siramamy 60g · Kanelina tahona 1 · Tahona lavanila 1 · Crème liquid 25sl · Ronono 100ml · Vary botry 150g · Ranom-boasarimakirana 1 · Siramamy 1sk · Sira araka izay tiana Ho anny saosy · Siramamy 100g · Crème fraiche 2 sk
Mahay mitazona lanja
Tsy azo hatao mimihitsy ny manao fifadian-kanina na régime fampihenan-tena lavareny.
Mialy Rajoelina : Maninona no nanao kiraro malalaka?
Nandritra ny lanonana fanokanana ny Rovan'i Madagasikara izay notanterahina ny zoma 6 novambra lasa teo dia isan'ny nanintona ny masontsika vehivavy ilay kiraro nanaovan'ny vadin'ny filoha, izay somary nalalaka.
Te ho salama foana : Tandrovy ireto !
Sarobidy ny fahasalamana ary io no hahatsapana indraindray fa tena harena. Mba hitandrovana ny vatantsika tsy harary anefa, dia misy ireo fihetsika tokony araha foana. Ireto no torohevitry ny mpitsabo.
Shopping « Fanaka »
1 -2 : Coiffeuse  Magasin Meuble et cuisine  Contact : 034 78 486 36
Sylvia R. Vahona, citron, siramamy no mahamanja be azy!
Tanjoni Ramihajaharisoa Sylvia hatraminny fony kely ny tsy mba hiantehitra amanolona izany eo aminny fiainana fa tsy maintsy hanana antom-pivelomana, na miasa amanolona na miasa tena.
Ady aminny Covid-19 Miha-mafy ny fiarahamiasanny Minisitera sy ny Dokotera tsy miankina
Tontosa ny Asabotsy teo tao aminny le Pavé Antaninarenina ny atrikasa ho fanatsaràna ny ady atao aminny valan'aretina « covid-19 ».
Fokontany miisa 34 ao aminny kaominina Amboasary, Distrika Amboasary Atsimo , no nisitraka « KALY TSINJO », akanjo fitafy isa-tokatrano avy aminny fitondram-panjakana izay nisoloan-dRamatoa Ministry ny Mponina MICHELLE Bavy Angelica tena nanomboka ny Talata 3 Novambra teo.
AMBOHIDRATRIMO Miompy akoho sy mpitatitra ny ankamaroan'ireo mpandraharaha
Ny 30% n'ireo tokony mandoa hetra ihany no mbola manefa izany ao amin'ny distrikan'Ambohidratrimo eto amin'ny faritra Analamanga.
Ambolonkandrina Jiolahy matin'ny fitsaram-bahoaka
Mpangalatra roalahy no tratra teny Ambolonkandrina ny zoma alina lasa teo, tamin'ny 12 ora. Niaraka taminny fitaovana toy ny pince coupante, hety be izy ireo tamin'izany
Ankizy 11 taona voaolana sy bevohoka Ahiana ny dadabeny
Rehefa tsikaritry ny reniny fa bevohoka ny zanany vavy izay napetrany tao amin'ny raibeny noho ny fangatahan'ity farany dia nitory ity ray niteraka azy ity renim-pianakaviana ity noho izy nampiandraiketina ny momba ilay ankizy vavy. Ny raiben'ity zaza ity tokoa no niangavy ny hipetrahany ao aminy fony vao feno 5 taona izy.
Ankizy niditra an-tsekoly - SOFIA Niakatra avo 3 heny
Feno hipoka avokoa ireo sekolim-panjakana rehetra any amin'ny faritra SOFIA tao aorian'ny fanafoana ny fandoavam-bola amin'ny fampidirana ny mpianatra. Manerana ireo distrika miisa 7 ao amin'ny faritra SOFIA dia saika
Antsirabe Ankizy sahirana 50 nomena fitaom-pianaran
Zanaky ny sahirana miisa 50 ao amin'ny tananan'Antsirabe no notolorana fitaovam-pianarana feno ny faran'ny herinandro teo.
Barea Madagasikara Lasa niatrika ny Elefantan'i Côte d'Ivoire
Ho raikitra ihany ny lalao ifanandrinan'ny Barea Madagasikara sy ny Elefantan'i Côte d'Ivoire. Efa nanainga ny asabotsy teo ny delegasionina Malagasy hihazo an'i Abidjan. Tsiahivina fa ho tontosaina any Abidjan amin'ny 12 novambra izao ny lalao mandroso. Amin'ny 17 novambra indray ny lalao miverina no ho tanterahina, any Toamasina, ao amin'ny Kianjan'ny Barikadimy.
CNaPS Hanome fanampiana tsy averina
Misy fanampiana miendrika lelavola tsy averina hozarain'ny avy ao amin'ny Tahirim-pirenena ho an'ny Fiahiana ara - tsosialy na ny CNaPS ho an'ny mpandray fisotroan-dronono sy vidi-takaitra ary ireo mpandova manan-jo ao aminy noho ny fisian'ny valan'aretina Covid 19.
Covid-19 Olona 5 no maty tao anatin'ny herinandro
Niisa 5 indray ireo olona marary lavon'ny valan'aretina Coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny herinandro. Teo anelanelan'ny asabotsy 31 oktobra hatramin'ny omaly alahady 8 novambra no nahazoana io salan'io.
Cyclo-pousse ao Antsirabe Tokony hanana fahazoan-dalana hiasa avokoa
Miantso ireo tompon'ny "cyclo-pousse" izay mbola tsy manana fahazoan-dalana hiasa avy amin'ny Kaominina ny fiadidiana ny
Kamala Harris Vehivavy voalohany, filoha lefitra any Etazonia
Noho ny fahalanian'ny demokraty Joe Biden ho filoha vaovaon'i Etazonia dia i Kamala Harris no filoha lefitra vehivavy mainty
LALANA VAOVAO MOMBA NY HERISETRA Voasazy koa izay mahita fa tsy mitory
Baikon'ny lalàna hitoroka eny anivon'ny fitsarana ny olona mahita trangana herisetra eto Madagasikara. Raha tsy mitoroka mantsy ireo olona mahita herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy dia tafiditra ho anisan'ireo voasazy miaraka amin'izay tena nahavanon-doza koa izy ireo.
Nosy Varika - Vatovavy Fitovinany Natsangana ny tambazotra miaro ny zon'ny ankizy
Tontosa ny zoma lasa teo ny fananganana taminny fomba ofisialy ny tambazotra miaro ny zon'ny ankizy ao aminny distrikan'i Nosy Varika,
Ilay nibata « baffle » teny aminny Rova Hotoloranny « Remax VIP STORE » fanomezana
Tadiavina fatratra ary ho toloranny « Remax» fanomezana manokana ilay lehilahy nibata «bafflle », nandritra ny fotoana nanokanana ny rovan'i Manjakamiadana, ny zoma lasa teo. Raha tsiahivina dia nilohaloha « baffle »
Sambava Mampianatra nahabevohoka mpianatra
Nametraka fitoriana teny anivonny mpitandro ny filaminana, ny ray aman-dreninity tovovavy kilasy famaranana na «terminale » ity,
Stephan, 2 taona... Trobaky ny vy tany amin'ny garderie (Mitantara ny Rainy)
Zazalahikely iray 2 taona, no mangataka fanampiana aminireo malala-tanana, mba hamonjena ny masony havia. « Accident » tany aminny « garderie » no nahazo azy. Fandidiana 2 no ilainy, vita ny iray fa ny faharoa mbola tsy fantatra, satria tsy manana hoenti-manana intsony ny ray aman-dreniny.